Iitattoos ezincinci zeli gcisa laseKorea libalaseleyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iitoto ze-13 ezincinci zenziwe ngumculi waseKorea
Uninzi lweeTattoo ezenziwe namhlanje zihlala zigubungela indawo ebanzi imizimba. Amagxa, umqolo kunye neetors zihlala ziindawo ezikhethiweyo zokuzoba kuzo zonke iintlobo zeesimboli, izilwanyana okanye nantoni na eza entlokweni yomculi kunye nomthengi. Kwakhona, kuxhomekeke kubukhulu, yile ndlela uhlawula ngayo.
Kodwa ayizizo zonke iitattoo artists ezixhasa ubungakanani obukhulu, kodwa nazo kukho abancinci ezijolise ekubeni zincinci, zilula, zilunge kwaye zibhityane. Ezi zizichazi ezinokuthi zichaze ubugcisa bokwenza umvambo onendawo yokudlala iTattoo, igcisa laseKorea elenza iiTatoo ezincinci kakhulu ngobukhulu kodwa zintle kakhulu ukujonga njengoko ubona kuthotho lwazo oya kuzifumana ngezantsi.
Indawo yokudlala iTattoo igxile kubuncinci kwaye ine wenza amawaka abo amawaka abantu. Yena ngokwakhe uchaza umsebenzi wakhe ngamagama ambalwa: umgca ococekileyo, omncinci kwaye olula. Kwaye yile nto kanye echaza ngokugqibeleleyo iitattoos zakhe.
Ayisiyiyo yonke into ekufuneka ibe nkulu Kwaye oko kunokubonwa kumakhulu eemitha kude, kodwa ukwazi indlela yokukhetha indawo yomzimba ukufumana enye yezi tattoos kunokubonisa ezinye iimpawu kubuntu bomntu onxibileyo.
Njengoko kuqhele ukwenzeka kolu hlobo lomculi, sinako fumana kwi-Instagram Kwaye ngokuqinisekileyo ezinye zezinto azenzileyo angenza ukuba zenziwe ngabantu bendawo ohlala udla ukuya kuzithatha ezi tattoos oza kuzibonisa kumvambo waselwandle, nangona ezi ziphantse zincinci kuya kufuneka zijongwe kufutshane ukuze siqonde ukuba zikhona.
Unayo i-Instagram yakhe kweli qhagamshelo ukuze ngaloo ndlela ungamlandela kwaye ufumane iiTattoos ezintsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iitoto ze-13 ezincinci zenziwe ngumculi waseKorea
Zoba unobumba ukukhangela imifanekiso kwi-500px Splash